Umhla My Pet » Yintoni Ngaba Abafazi olufunayo UbuDlelwane?
ukubuyekezwa: Oct. 22 2020 | 2 min ukufunda
Ngokutsho isifundo kuqhutywa 2012, 41% abatshata, 60% Imitshato yesibini 73% imitshato ngowabathathu United States ekupheleni komtshato. Ezi amanani elothusayo ngokwenene kwaye zibonisa ukuba amadoda nabafazi US esokola ukuba ubudlelwane ndomelele. Ukuze ulwalamano ukuba womelele, omabini amaqabane kufuneka uqonde iimfuno zomnye ngokugqibeleleyo. Ngoko ke, apha izinto ezithile abafazi khangela kubudlelwane.
uthando: Mhlawumbi ucinga akuyomfuneko ukuba abe ngumfazi ufune uthando, kodwa sasingakwazi phambili imshiye “uthando” njengoko zithe phithi nje ukuba azive ethandwa. Oko akuthethi ukuba umfazi ufuna umntu ebomini bakhe ukuze ukubonisa uthando esidlangalaleni rhoqo, kodwa ufuna nje ukuba ukubonakalisa uthando lwakhe lwakhe Babaqhathanisele ngezenzo namazwi njengoko rhoqo kangangoko; uboniso karhulumente athile uthando akukho nto imbi nokuba. Ngoko ke, Ukuba ngaba indoda, ukugcina ulwalamano oluhle kunye nomfazi omthandileyo kufuneka siqhubeke ekhumbuza yakhe kangakanani umthanda ngamazwi nezenzo.
ukhuseleko: Uhambo ubomi lula ukuba ubani, kungakhathaliseki isini, kodwa abafazi uhambo ngokuqhelekileyo kunto yomelele. Ajongeka ukujamelana nemiba eyahlukeneyo yokhuseleko ngokusebenzisa phantse bonke ubomi babo, isabelo esikhulu leyo enxulumene nezesini yabo.
Kwabasetyhini US, zesinyanzeliso sesincwaso awuyonto angaqhelekanga. A yomnxeba zimelwe kuzwelonke uphando olubandakanya 612 abafazi abadala kuqhutywa ngoJuni, 2000 lubonisa ukuba phantse bonke baye bajamelana ukuxhatshazwa esitratweni ngaxa lithile ebomini. Around 87% yabafazi American abaphakathi 18 kwaye 64 bafunyanwa iminyaka ukuba amava akhathazwe ungowasemzini oyindoda.
Oku ngenene eliphezulu kokuba izimbo kushiya abafazi benganqabisekanga. Ngoko ke, bafuna neqabane baya endinokubathemba ngokupheleleyo. Abasetyhini banqwenela amaqabane abaza kudlala indima umkhuseli ogqibeleleyo kubenza bazive ekhuselekileyo.
Njengoko umntu ukuba sikwazi ukwenza iqabane lakho nabakholose, uya kubona kungekudala ukuvulwa yakhe kuwe zombini ngokwesondo nasemphefumlweni. Oku kuya ngokuzenzekelayo kwenza ulwalamano phakathi ababini kuni olomelele.
uburharha: Uburharha kubaluleke kakhulu kwabasetyhini. Amabhinqa ukhangele abantu ngentwana ingqiqo uburharha i.e. amadoda enokubenza kuhleka. Ngokutsho uphando ikhutshwa phandle MarketTools Inc, 58% abafazi bafuna amaqabane abo ukuba ingqiqo uburharha. Ngoko ke, umntu efuna iindlela zokwenza iqabane lakhe onwabile kunye nesiqulatho kufuneka azame ukuba okubhetele wittiest bakhe.
intlonipho: Nangona thina ilukhankanya yokugqibela, nentlonelo ngokuqinisekileyo eyona nto ibalulekileyo ukuba kubudlelwane ngenxa uninzi yabafazi American. Uphando yi MarketTools Inc watyhila ukuba 84% abasetyhini baziva ukuba ubudlelwane ukuze uphumelele, ukufumana intlonipho evela iqabane kubaluleke kakhulu.
Kufuneka uyazibuza “kuthekani imbonakalo yomzimba”? Ewe, abasetyhini bathanda ukuba amadoda kunye namaqabane abo enomtsalane, kodwa kubo ungaze omnye iimpawu kuqala bakhangele umntu.